Dhizaini Kufunga: Kushandisa Rose, Bud, Thorn Zviitiko Kushambadzira | Martech Zone
Vhiki rino ranga richinakidza sezvo ndanga ndichishanda nevamwe vanamuzvinabhizimusi kubva kuSalesforce neimwe kambani kuti ndione kuti ndingaite sei kuvandudza zvirongwa zvevatengi vavo. Gaka rakakura muindasitiri yedu izvozvi nderekuti makambani anowanzove nebhajeti uye zviwanikwa, dzimwe nguva ane maturusi, asi kazhinji anoshaya zano rekubvisa chirongwa chakakodzera chekuuraya.
Chikumbiro chimwe chete chavanotora munzira kusvika kune wese mutengi chiitiko chekufunga chinonzi "ruva, bud, munzwa". Hwakareruka hwechiitwa uye madingindira anozivikanwa nawo anoita kuti ive nzira ine simba kwazvo yekunongedza maburi mumabasa ako ekutengesa.
Dzvuku, bhuruu, uye girini manotsi anonamira
Yakawanda yemadziro kana chena bhodhi nzvimbo
Mufambisi wekuchengeta zvinhu zviri mugwara
2 kusvika ku4 vanhu vakakosha vanonzwisisa maitiro
Zvichida iwe uchazoshandisa tekinoroji nyowani yekushambadzira kugadzira ma automated nzendo evatengi vako. Iyo purojekiti inogona kusvika kumhere yekumira sezvo iwe usinganyatso kuziva kwekutanga kuronga kwako. Apa ndipo panobuda ruva, bukira, munzwa unogona kuuya unobatsira.
Rose - Chii Chiri Kushanda?
Kutanga nekunyora pasi izvo zviri kushanda pamwe nekuitwa. Zvichida iko kudzidziswa kwave kwakanakisa kana iko kusununguka kwekushandisa kwepuratifomu. Pamwe iwe une zviwanikwa zvihombe pane yako timu kana kuburikidza wechitatu-bato kubatsira. Chingave chero chinhu… ingo nyora pasi zviri kushanda.
Bud - Ndeipi mikana?
Paunotanga kudurura kuburikidza nevanhu vako, maitiro, uye chikuva, mimwe mikana inokwira kumusoro. Zvichida chikuva chinopa zvemagariro, kushambadzira, kana kutumira mameseji kugona izvo zvinogona kukubatsira zvirinani tarisiro yako tarisiro yakawanda-chiteshi. Zvichida pane kumwe kubatanidzwa kunowanikwa kuisa huchenjeri hwekugadzira mune ramangwana. Zvinogona kuva chero chinhu!
Munzwa - Chii Chakatsemuka?
Sezvauri kuongorora chirongwa chako, unogona kuona zvinhu zvisipo, zvinoodza moyo, kana izvo zviri kukundikana. Pamwe ndiwo mutsara wenguva, kana iwe hauna dhata rakaringana rekuita dzimwe sarudzo pa.
Nguva yeku Cluster
Kana iwe ukapedza yakanaka maminetsi makumi matatu kusvika makumi mashanu uchipa simba kuchikwata chako kuti utumire zvinyorwa uye uchifunga nezve rose rinogona kuitika ruva, bundu, kana munzwa, unogona kusiiwa uine muunganidzwa wemanotsi anonamira kwese kwese. Nekuburitsa pfungwa dzako dzese pane zvinyorwa zvine mavara-mavara uye nekuzvironga, iwe uchaona mamwe madingindira achibuda ausina kumboona kare.
Nhanho inotevera ndeyekusanganisa zvinyorwa, maitiro aya anonzi kuenderana kwemepu. Shandisa zvikamu kuti ubvise manotsi uye uzvirongedze kubva kumaruva, bundu, munzwa kune chaiwo maitiro. Panyaya yekushambadzira kwako kuyedza, iwe ungangoshuvira kuve nemakoramu akati wandei:
kuwanikidza - iko kutsvagisa uye data rinodikanwa kuronga kwekushambadzira.
nzira - iko kushambadzira.
Kutevedzera - maturusi nezviwanikwa zvinodiwa kuvaka chirongwa chekushambadzira.
kuuraya - zviwanikwa, zvinangwa, uye kuyerwa kwekutanga.
Optimization - nzira dzekuvandudza chirongwa munguva chaiyo kana nguva inotevera.
Paunenge uchifambisa zvinyorwa zvako kuzvikamu izvi, uchaona mamwe madingindira makuru anotanga kuita. Zvichida unotomboona imwe ichive yakasvibira… ichikubatsira iwe kuona kuti panovharirwa nzira kuti ugone kutsunga kuti ungabudirire sei kuburikidza nayo.
Ichi chingori chiitiko chakareruka icho chinoshandiswa mukufunga dhizaini. Dhizaini kufunga kuita kwakawanda kwazvo uko kunowanzo shandiswa kune mushandisi ruzivo dhizaini, asi irikushanduka mukubatsira mabhizinesi kugadzirisa nyaya hombe zvakare.
Pane zvikamu zvishanu mukufunga kwekugadzira - emphathize, tsanangura, ideate, prototype, uye bvunzo. Kufanana pakati peiyo neiyo agile kushambadzira rwendo Ini ndakagadzira yakanga isiri tsaona!
Ini ndinokukurudzira iwe kuti utore kosi, tarisa mamwe mavhidhiyo, kana kunyange tenga bhuku paKugadzira Kufunga, iri kushandura mashandiro ari kuita mabhizinesi. Kana iwe uine chero kurudziro, ndapota vasiye iwo mune zvakataurwa!
Tags: Activitybudkugadzira kufungapfungwaMarketingMarketing nziraakasimukaakasimuka bundu munzwanziramunzwa